Nhau - Iyo mukana weAluminium Fomu Basa
1. Kumusoro kwekuvaka kugona uye ipfupi kutenderera: Iyo aruminiyamu chiwanikwa kuvaka formwork sisitimu inokurumidza-kuburitsa muforoma sisitimu, iyo inogona kubviswa muma18-36 maawa, saka chete chete rukoko rwealuminium formwork uye matatu matanda eimwe tsigiro anodikanwa kusangana zvinodiwa. Kuvaka kwakajairwa kunogona kushandiswa. Kusvikira mazuva 4-5 efururu yekutanga, nekudaro kupfupisa nguva yekuvaka, kuchengetedza mari yekutarisira yeyuniti yekuvaka, uye kupfupisa kutenderera kwevanogadzira zvivakwa.
2. Reusable uye yakaderera mutengo: Zvese zvishongedzo zvealuminium formwork system inogona kushandiswazve. Iyo aluminium alloy formwork system inoshandisa yakasarudzika extrusion kugadzira aluminium alloy profiles sezvinhu zvakasvibirira (6061-T6). Seti ye formwork maratidziro anogona kushandurwa uye kushandiswa kweanopfuura mazana matatu nguva. Mari yakaderera yekushandisa.
3.Kuvaka kwakanaka uye kugona kwakanyanya: Iyo aluminium formwork system iri nyore uye inonamira kuungana. Izvo zvinongoda kuwedzera yakajairwa bhodhi zvakaenzana panguva yekuisirwa. Iyo aluminium formwork yakareruka huremu hwe18-25 kg pa square mita. Maitiro ekuvaka akasunganidzwa zvakakwana uye akatakurwa nemaoko, uye haavimbe nekusimudza michina yeMechanical (vashandi vanowanzoda wrench kana sando diki, iri nyore uye inokurumidza). Vanoisa vanogona kuisa 20-30 mativi emamirimita pamunhu pazuva (aluminium formwork vanoisa vanogona kuchengetedza 30% kana ichienzaniswa neforoma yematanda, uye hapana nyanzvi dzinodiwa. Izvo zvinokwana kuita kudzidziswa kuri nyore kwevashandi vekuvaka kweawa imwe usati waiswa) .
4. Kugadzikana kwakanaka uye kwakakura kutakura kugona: Iyo aruminiyamu formwork system yese yakaunganidzwa nealuminium formwork. Mushure mekunge system yaunganidzwa, ichaumba furemu yakazara ine kugadzikana kwakanaka. Iko kutakura kugona kunogona kusvika 60KN pamamirimita mita, uye hapana tsaona dzekuwedzera tsaona dzinoitika. .
5. Wide akasiyana mafomu: Iyo aruminiyamu formwork system inokodzera kune ese anovaka zvinhu, senge anotakura-kutakura madziro, mbiru, matanda, pasi masirabhu, masitepisi, balconi, nezvimwe, izvo zvinogona kupedzwa nesimendi kudira panguva imwechete.
6. Mhedzisiro yakanaka yekongiri pamusoro mushure mekuparadza: Mushure mekuparadza kwealuminium formwork, mhando yekongiri yepamusoro yakatetepa uye yakachena, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvekupedzisa uye yakatarisika-yakatarisana nekongiri isina kupurasita, iyo inogona kuchengetedza mutengo wekunamatira kwechipiri.
7. Hapana marara ekuvaka pane saiti, kuvaka kwakachengeteka: Zvikamu zvese zvealuminium formwork zvinogona kushandiswazve, hapana marara panzvimbo iyi mushure mekudonha, hapana ngura, hapana ngozi yemoto, hapana zvipikiri zvesimbi panzvimbo yekumisikidza, hapana matanda ehuni akasiiwa iyo Chainsaw Matanda edanda uye mamwe marara ekuvaka, iyo nzvimbo yekuvaka yakashambidzika, uye haizogadzi huwandu hwakawanda hwetsvina yekuvaka senge kushandisa fomu yemuti. Iyo inosangana zvizere neyakajeka chivakwa ekuvaka zviyero. Nekushandisa mashoma mapaneru, inogona kuve nechokwadi chekuti vavaki vanokwanisa kushanda zvakachengeteka pamapaneru. 8. Imwe-yenguva dhizaini, yakakwirira kunyatsoita, uye yakasimba kugona: Zvinoenderana nemadhirowa ekuvaka, imwe-nguva dhizaini, kudira kwakakosha, kuvaka kwakasimba, zvidiki zvikanganiso uye kukwirira kwakaringana, kuverengera simba rese uye hupenyu hwebasa hwechivakwa, zvakanyanya inokodzera zviyero-zvepamusoro-soro, zvivakwa zvepamusoro-soro uye Kune akawanda zvivakwa zvemhando imwechete yemhuri, iyo aluminium formwork inogona kuunganidzwa neakasiyana maratidziro emahwendefa zvichienderana nechirongwa. Kana fomu rakashandiswa richivakwazve muchivako chitsva, ingangoita 20% yemaplate asiri eyakajaira anoda kuchinjwa.
9. Yakakwira yekudzora mwero uye hombe yakasara kukosha: Aluminium alloy zvinhu zvinogona kudzokororwa nguva dzese. Mushure mekunge aruminiyamu formwork system yabvamburwa, apo marara ekurapa ane huwandu hwakakura hunosara, zvese zvigadzirwa zvealuminium formwork zvinhu zvinogadziriswazve, zvinoenderana nekuchengetedzwa kwesimba kwenyika, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye Low-kabhoni, mirairo yekudzora mweya, uye inoenderera. maindasitiri marongero.
10. Mashoma ekutsigira masisitimu uye kufamba nyore: Mune echinyakare nzira dzekuvaka, pasi rakanyorwa, chikuva uye mamwe mafomu ekugadzira maitiro anowanzo shandisa akazara-pasi mabhureki, ayo anoshandisa vashandi uye zvigadzirwa. Iyo yepasi rutsigiro sisitimu yealuminium alloy formwork inotora "imwechete-pombi yakamira yakazvimirira" rutsigiro, ine avhareji daro yemamita 1.2, hapana chikonzero chekutsigira kana kutsigira rutsigiro rutsigiro, nzvimbo huru yekushandisa, vashandi vekuvaka, kubata kwakapusa zvinhu, uye nyore uye kubviswa kuri nyore kwezvimwe zvitsigiro. Nyore kubata.